Global Voices teny Malagasy · 10 Janoary 2011
10 Janoary 2011
Tantara tamin'ny 10 Janoary 2011
Sodana: Ny Fitsapan-kevibahoaka any atsimon'i Sodana, an-tsary
Afrika Mainty10 Janoary 2011
Misy fitsapan-kevibahoaka iray mandeha amin'izao fotoana izao any Atsimon'i Sodana, ny 9 Janoary ka hatramin'ny 15 Janoary 2011 mba hijerena na hijanona ho isan'ny Sodana ihany ny tapany atsimo na tsia, na ho firenena iray mahaleotena. Ireto sary ireto dia mandrakitra ho tantara ny fitsapan-kevibahoaka any atsimon'i Sodana. Jereo ny...
Ejipta: Mpitoraka bilaogy iray very asa noho ny bilaoginy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana10 Janoary 2011
Tsy i Mohamed Maree no Ejiptiana voalohany mpitoraka bilaogy very asa noho ny zavatra nosoratany tany anaty bilaoginy, satria nialoha làlana azy i Founon sy Ahmed El Droubi , saingy izy no vao haingana indrindra very asa noho ny asa sorany. Velabelarin’ i Zeinobia bebe kokoa ny raharaha : “Maree...
Tonizia: “Azafady mba ambarao an'izao tontolo izao fa miala aina i Kasserine!”
Miasa andro aman'alina ireo Toniziana mponin'ny aterineto mba hampiseho amin'izao tontolo izao ny vonomoka mitranga ao amin'ny firenen-dry zareo. Ny zavatra izay nanonboka tamin'ny endrika fanoherana ny tsy fisian'asa raha nandoro ny tenany ny Toniziana iray vao 26 taona tao Sidi Bouzid tamin'ny volana lasa dia nandrehitra sy nampihanaka onjam-panoherana...
Amerika Latina10 Janoary 2011
Hongria: Fanentanana ho fanamaintisana manerantany
Eoropa Afovoany & Atsinanana10 Janoary 2011
Ireo olon-tsotra mpiaro ny fahalalahana maneho hevitra dia miezaka mitazona ny haavon'ny fandrakofana iraisampirenena amin'ny alalan'ireo fitaovam-pifandraisana ao amin'ny aterineto. Vondrona iray antsoina hoe Blackout for Hungary (Haizina ho an'i Hongria) no nanainga fanentanana iray maharitra 24 ora nanomboka tamin'ny 5 Janoary teo hanoherana ilay lalàna vaovao momba ny media...